वर्षमान पुनमा देखिएको 'दुर्लभ' स्वास्थ्य समस्या के हो? - jagritikhabar.com
वर्षमान पुनमा देखिएको ‘दुर्लभ’ स्वास्थ्य समस्या के हो?
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन चीन र थाइल्याण्डमा उपचार गराएर तीन महिनापछि नेपाल फर्किँदैछन्। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि नेता पुनले पछिल्लो समय चीनको थर्ड पीपुल्स हस्पिटल अफ सेनजेनमा उपचार गराएका थिए।
यो रोग नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। एउटा लेभलभन्दा अर्को लेभलमा बढ्न नदिनु नै नियन्ण गर्नु हो। यस्तो विरामीको कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यसो हेर्दा जण्डिस पनि देखिँदैन। जण्डिस देखिनलाई त आँखा पहेँलो हुनुपर्‍यो। बाहिरबाट हेर्दा जण्डिस पनि हुँदैन, आँखा पनि ठीक हुन्छ तर, भित्र जाँच गर्दा ‘बीलीरुबीन’ लेभल (उच्च) हुन्छ। रगतको परीक्षण र कलेजोको जाँच गरेर नै डाइग्नोसीस गर्ने हो।
कति विरामीहरु सिम्टम (लक्षण) नदेखिने कारणले धेरै विरामीहरु जीवनभरि अननोटिस (सम्पर्कबाहिर) भइरहेका हुन्छन्। जो बीरामीले चेक गराउनुहुँदैन उहाँको त देखिँदैन नि। यो रोग कसैकसैलाई जन्मजात पनि देखिन्छ। अन्नपूर्ण बाट साभार